F-6018T Pipes Laser fanapahana Machine - China Dongguan Glorystar Laser
Fa samy hafa endrika Tube fanapahana Product Features ● avo voahadihady marina tsara baolina visy fifindran'ny, avo fametrahana mazava tsara Linear Guide-lalamby ● voahadihady servo maotera rafitra mitondra fiara, nohafarana helical gearbox. ● Atokàny Tube fanapahana fitaovana ● Fast fanapahana haingana, avo fahombiazana, azo antoka, milamina fampisehoana ampiharina orinasa be mpampiasa amin'ny isan-karazany ny vy vokatra orinasa toy ny sodina metaly fanodinana, cookware sy fidiovana appliance, dokam-barotra & famantarana, jiro & fitaovana, herinaratra cabi. ..
Fa samy hafa endrika Tube fanapahana
● voahadihady avo baolina marina tsara visy fifindran'ny, avo fametrahana mazava tsara Linear Guide-rail
● voahadihady servo maotera rafitra mitondra fiara, nohafarana helical gearbox.
● Atokàny Tube fitaovana fanapahana
● Fast fanapahana haingana, avo fahombiazana, azo antoka, milamina fampisehoana
Nampiasaina be teo amin'ny isan-karazany ny vy vokatra orinasa toy ny sodina metaly fanodinana, cookware sy fidiovana appliance, dokam-barotra & famantarana, jiro & fitaovana, herinaratra cabinets, Auto faritra, milina sy ny fitaovana, ankohonany appliance, elavator sy marina tsara faritra fanodinana, sy ny sisa .
Tena ampiharina amin'ny taratasy isan-karazany fitaovana vy tsy fifandraisana haingana fanapahana, sokitra. sy punching, toy ny vy antonony tsara ny hafanana, Stainless vy, firaka, manganese vy poakaty, ny tafo, aliminioma, varahina sy vy sodina fanodinana, sns
Fahefana amin'ny ankapobeny fanjifàna <20KW
Transmission maody Ball Sokiro Transmission
miasa malefaka 380V 50Hz (60Hz)
Previous: FAA-3015G / FAA-4020G Fibre Laser niteti-milina amin'ny fantsona manapaka
Manaraka: Double Station Laser Welding Machine
2 Loha Laser Cutter Machine
20w Fibre Laser fanamarihana Machine
20w Mopa Fibre Laser fanamarihana Machine
3015 Fibre Laser manapaka Machine
Acrylic Laser nanapaka milina
Ads Laser nanapaka Machine
Arcylic Laser nanapaka Machine Price
Shinoa Blm Sodina Cutting Machine
Lamba nanapaka milina
Cnc Sodina Laser manapaka Machine
Fibre Laser Cutter Price
Fibre Laser Metal manapaka Machine
Fibre Metal Laser manapaka Machine
Laser manapaka milina
Laser Machine Fa sodina
Lazer nanapaka Machines Acrylic
Metal Tube Fibre Laser manapaka Machine
Sodina Natambatra nanapaka Machine
FAA-3015CEG / FAA-4020CEG Full Closed Fibre Laser C ...